Waxaa la aasaasay 1993, 3F Electronics Industry Corp waa soo -saare xirfadle ah iyo dhoofis oo ka walaacsan naqshadeynta, horumarinta iyo soo -saaridda fiilooyinka korontada, fiilooyinka siligga, tuubooyinka rinjiga, habaynta suunka fiilooyinka, iyo xarigga kabaha nylon.
Waxaan joognaa Shenzhen, oo leh marin gaadiid oo habboon. Dhammaan alaabooyinkayagu waxay u hoggaansamaan heerarka tayada caalamiga ah waxaana si weyn loogu qaddariyaa suuqyada kala duwan ee adduunka oo dhan.
Dhammaan alaabooyinkayagu waxay leeyihiin shahaadada UL, ROHS iyo shahaadada REACH, qaar ka mid ah silig gaar ah waxay leeyihiin shahaadada VDE, iyo siligga baabuurtu wuxuu leeyahay heerka Ameerika, heerka Japan, heerka Jarmalka si uu ula kulmo suuq kala duwan.
Daboolida aag dhan 20,000 mitir oo laba jibbaaran, waxaan hadda haysannaa in ka badan 600 oo shaqaale ah, waxaan ku faannaa tirada iibka sannadlaha ah oo ka badan USD 150 milyan oo hadda dhoofisa 80% wax -soo -saarkeenna adduunka oo dhan.
Xarumaheena qalabaysan iyo xakamaynta tayada aad u fiican dhammaan marxaladaha wax soo saarka ayaa noo saamaxaya inaan dammaanad qaadno wadarta qanacsanaanta macaamilka.
Ka sokow, waxaan helnay shahaadada tayada caalamiga ah ee ISO9001 sanadkii 2001, waxaanan helnaa shahaadada TS16949 & Qc080000 2007. Shirkadeena sidoo kale waxay leedahay shahaadada IATF16949.
Iyada oo ay sabab u tahay badeecadahayaga tayada sare leh iyo adeegga macaamiisha ee aadka u wanaagsan, waxaan helnay shabakad iibinta caalamiga ah oo gaartay Yurub, Ameerika, Australia iyo Aasiya.
Isla mar ahaantaana, waxaan ku leenahay 17 xafiis adeeg oo ku yaal Shiinaha gobollo kala duwan, waxaanan ku leenahay 3 xafiiska adeegga dusha sare ee Mareykanka, HK iyo Thailand si aan u siino adeegga ugu fiican.
Warshadaha elektiroonigga, waxsoosaarka qalabka makaanikada; gaar ahaan wax -soo -saarka diyaaradda, Wax -soo -saarka robot -ka, wax -soo -saarka baabuurta tamarta cusub iyo soo -saarka qalabka guryaha.
Si badeecadu u noqoto mid sugan; Keydso kheyraadka, oo nolosheena ka dhig mid aad u qurux badan.
DEGDEG, JILICSAN, JAWAAB.
TAYADA HORE, DAMMAAN BIXINTA, ADEEGGA SHAQAYNAYA, KOOBKA MACMIILKA KOOWAAD, TALAABADA TALLAABO, EBER- DEFECT- MAAMUL.